Rebuilderd: Nnwere onwe ọnụọgụ ngwugwu nkwenye maka usoro Linux | Site na Linux
N'oge na-adịbeghị anya a mara ọkwa mmalite nke "Rebuilderd" nke achọrọ dị ka usoro nnwale nnwere onwe maka nchịkọta ọnụọgụ abụọ que na-enye ohere ịhazi nkwenye nke nchịkọta nke nkesa site na itinye usoro iwu na-agba ọsọ nke na-atụle nchịkọta enwere ike ibudata yana nchịkọta anatara dị ka iwughachi na sistemụ mpaghara.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, sistemụ a na-enye ọrụ na-enyocha ọnọdụ nke ndepụta ngwugwu na-akpaghị aka na-amalite iwughari ngwugwu ọhụrụ na gburugburu ebe obibi, nke ala ya na mmekorita gburugburu Arch Linux isi ewu ngwugwu.
Mgbe ị na-achịkọta ọzọ, nuances dị ka ezigbo mmekorita nke ịdabere na-echebara, iji ihe eji eme ihe na nsụgharị ndị na-agbanweghi agbanwe nke ngwaọrụ ndị na-ewu ụlọ, otu usoro nhọrọ na ntọala ndabara, yana ichekwa usoro nchịkọta faịlụ (iji otu usoro nhazi).
Ntọala usoro ihe owuwu wezuga onye nchịkọta ya site na itinye ozi izugbe na-ekwekọghị dịka ụkpụrụ na-enweghị usoro, njikọ nke faịlụ, yana data gbasara ụbọchị na oge nchịkọta.
1 Banyere Rebuilderd
2 Ntinye na mkpo
Ugbu a naanị nkwado nnwale dị maka ịlele nchịkọta Linux Arch na iwughachi, mana atumatu igbakwunye nkwado Debian n’oge na adighi anya.
Ugbu a, A na-enye ụlọ ndị nwere ike ikwugharị maka 84.1% nke nchịkọta site na ebe nchekwa Arch Linux, ọ 83.8% si na mgbakwunye na 76.9% si na nchekwa obodo. Maka iji tụnyere, na Debian 10 ọnụ ọgụgụ a bụ 94,1%.
Ọ bụ ezie na, ụlọ bụ akụkụ dị mkpa nke nchekwa, dịkwa ka ha nye onye ọ bụla ọrụ ohere iji hụ na ngwugwu byte-by-byte enyere site na ngwugwu a na-ekesa dakọtara na ndi ejiri ya wepụta onwe ya
Enweghi ike inyocha njirimara nke ọnụọgụ abụọ agbakọtara, onye ọrụ nwere ike ịtụkwasị obi na ntụkwasị obi nke onye ọzọ na-ewu ụlọ, na-emebi ihe nchịkọta ma ọ bụ mkpokọta ngwaọrụ ebe ọ nwere ike iduga ngbanwe akara akara.
Ntinye na mkpo
N'okwu kachasị mfe, iji wughachi ya zuru ezu iji wụnye ngwugwu ahụ ewughachiri site na nchekwa nchekwa nkịtị, bubata igodo GPG iji nyochaa gburugburu ebe obibi ma rụọ ọrụ sistemụ kwekọrọ. O kwere omume mejuputa netwọkụ ihe otutu emegharịrị.
Iji wụnye, anyị ga-emeghe ọnụ na ya anyị pịnye iwu na-esonụ:
Mere nke a, ugbu a, anyi aghaghi ibubata igodo GPG, ebe obu Rebuilderd ga-enyocha Arch Linux buut oyiyi, maka nke a na ọnụ anyị ga-pịnye iwu na-esonụ:
Mgbe nke a gasịrị anyị ga-agbakwunye onye ọrụ anyị na otu Rebuilderd, ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịnweta njehie:
Ugbu a naanị anyị kwesiri inyocha na Rebuilderd na-agba ọsọ banyere usoro, maka nke a, anyị ga-pịnye:
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkekọrịta nsonaazụ na netwọkụ ahụ, anyị ga-pịnye:
systemctl enable – ugbu a wughachiri onye na - arụ ọrụ @ alpha
Ugbu a ọ dị mkpa iburu n'uche na Rebuilderd agaghị arụ ọrụ ruo mgbe akọwapụtara ya n'ụzọ doro anya site na ebe a na-arụ ọrụ nchịkọta usoro, maka nke a anyị ga-agbanwe faịlụ /etc/rebuilderd-sync.conf ebe a na-ahazi profaịlụ mmekọrịta na na profaịlụ aha ndị pụrụ iche:
Otu ihe atụ banyere nke a bụ ihe ndị a:
Ozugbo agbanwetara faịlụ ahụ, ị ​​ga - eme ka ngụọ oge mekọrịta profaịlụ ahụ na - akpaghị aka:
Finalmente ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere Rebuilderd, ha kwesịrị ịma na edere ya na Rust ma kesaa ya n'okpuru ikike GPLv3 ma ị nwere ike ịlele nkọwa ya niile na koodu ahụ. Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Rebuilderd - Nnwere onwe ọnụọgụ ngwugwu nkwenye usoro maka Arch Linux